2073-04-01 / 3.6K 0
असार ५ :- व्यवस्थापिका संसदले ‘व्यवस्थापिका संसद् नियमावली २०७३’ बहुमतले पारीत गरेको !
असार ६ :- अफगानिस्तानको राजधानी काबुल नजिकै भएको आतंकवादी–आत्मघाती बम विस्फोटमा १२ नेपाली र नेपाली मूलका २ भारतीय गरी १४ जनाको मृत्यु भएको ।
असार ८ :- महालेखा परीक्षक भानु आचार्यले पदबाट राजीनामा दिएका ! उनले २०७० वैशाख २५ मा परीक्षकका रूपमा काम थालेका थिए । परीक्षकको सेवा अवधि ६ वर्ष वा उमेरको हद ६५ वर्ष हुन्छ ।
असार ९ :- सरकारले लगानी बोर्डको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा राष्ट्र बैंकका पूर्वडेपुटी गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई नियुक्त गरेको , अर्थमन्त्री संयोजक रहेको छनोट समितिले अधिकारी, निवर्तमान सीईओ राधेश पन्त र सरोज कोइरालालाई नियुक्त गर्न सिफारिस गरेको थियो ।
असार १० :- ‘सम्पूर्ण चेपाङ समुदायको चाहना, चेपाङ स्वायत्त क्षेत्रको स्थापना’ भन्ने नाराका साथ नेपाल चेपाङ संघको चौथो राष्ट्रिय महाधिवेशन चितवनमा आयोजना गरिएको !
असार १० :- प्रधानमन्त्री केपी ओलीको भ्रमणका क्रममा भएको सम्झौताबमोजिम भारतको विशाखापटनम बन्दरगाह प्रयोगका लागि दुवै देशका अधिकारीले झन्डोत्तोलन गरी सांकेतिक आयात–निर्यात घोषणा गरेका । यो झन्डोत्तोलनपछि तेस्रो मुलुकहरूसँगको व्यापारका लागि नेपाललाई यो बन्दरगाह प्रयोगको ढोका खुलेको छ । यस अघी कोलकाता र हल्दिया बन्दरगाहबाट मात्र नेपालले आयात–निर्यात गर्न पाएको छ ।
असार १२ :- श्री भगवती क्लबले सहिद स्मारक रेडबुल ‘सी’ डिभिजन लिग प्रतियोगिता जितेको । सुपर लिगको अन्तिम खेलमा श्री भगवतीले एन्फा कम्प्लेक्स सातदोबाटोमा मनोहरा युनाइटेड युथ क्लबमाथि २–० को जित हात पार्‍यो।
असार १३ :- संगीत, अभिनय, रंगमञ्च लगायतका विधामा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्‍याएबापत चार स्रष्टाले ‘नेपाल संगीत तथा नाट्य राष्ट्रिय प्रज्ञा पुरस्कार–२०७२’ पाएका । गोपालनाथ योगीलाई संगीततर्फ, महेन्द्र मलङ्गीयालाई नाटकतर्फ, शकुन्तला गुरुङ शर्मालाई अभिनयतर्फ र लोकगायक प्रचण्डबहादुर बुढाथोकीलाई लोकसंगीततर्फको सम्मान प्रदान गरिएको हो ।
असार १४ :- डा. भगवान् कोइराला र महावीर पुनले ‘मदन भण्डारी राष्ट्रिय पुरस्कार’ पाएका । मदन भण्डारी फाउन्डेसनले स्वास्थ्य क्षेत्रमा योगदान पुर्‍याएबापत हृदयरोग विशेषज्ञ डा. कोइरालालाई र प्रविधिको क्षेत्रमा योगदान पुर्‍याएबापत पुनलाई पुरस्कृत गरेको हो । पुरस्कारमा जनही १ लाख रुपैयाँ र सम्मानपत्र रहेको छ ।
असार १५ :- राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले शिक्षा ऐन आठौं संशोधन विधेएक प्रमाणीकरण गर्नुभएको । यस संगै :- उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद् खारेज भएको, राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड गठन भएको , विद्यालय शिक्षा अब १२ कक्षासम्म भएको ।
असार १५ :- एपीएफ क्लबले यती फ्लोरिङ राष्ट्रिय महिला भलिबल प्रतियोगिताको उपाधि बुधबार हात पारेको ।
असार १५ :- नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान र बङलादेशको बङगला एकेडेमी बिच प्राज्ञिक सम्झौता भएको । प्रतिष्ठानका कुलपति गंगाप्रसाद उप्रेती र बंगला एकेडेमीका डाइरेक्टर जनरल समसुजमन खानले ढाकामा आयोजित विशेष समारोहमा प्राज्ञिक आदानप्रदानको सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन् । सम्झौतापत्रमा भाषा, साहित्य, संस्कृति, इतिहास र दर्शनको खोजअनुसन्धान, अनुवादजस्ता प्राज्ञिक कार्य गर्ने बुँदाहरू समेटिएको छ ।
असार १८ :- चलचित्र कलाकार संघ (फान) ले पहिलो पटक अवार्ड कार्यक्रम सम्पन्न गरेको । फान अवार्डमा नायक आर्यन सिग्देल र नायिका नम्रता श्रेष्ठ उत्कृष्ट घोषित भएका । दुवैलाई फिल्म ‘क्लासिक’ का लागि उक्त अवार्ड प्रदान गरिएको हो । २४ विधामा प्रदान गरिएको अवार्डमा उत्कृष्ट फिल्मको अवार्ड भने ‘पशुपति प्रसाद’ ले हात पारेको छ ।
असार २० :- दुईपक्षीय सन्धि–सम्झौतासम्बन्धी सुझाव दिन बनेको नेपाल र भारतका प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (ईपीजी) को बैठक काठमाडौंमा सुरु भएको । दुवै मुलुकका सरकारले निकै महत्त्वका साथ हेरिरहेको यो बैठकलाई नेपालले सधैं उठाउँदै आएको १९५० को सन्धि खारेजी तथा अन्य सम्झौताको सुधार गर्ने मौकाका रूपमा लिएको छ । प्रबुद्ध समूहमा नेपालका तर्फबाट पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री डा. भेषबहादुर थापाको संयोजकत्वमा पूर्वमन्त्री नीलाम्बर आचार्य, अख्तियारका पूर्वप्रमुख आयुक्त सूर्यनाथ उपाध्याय र सांसद राजन भट्टराई सदस्य छन् । यस्तै भारतका तर्फबाट संयोजक भगत सिंह कोसियारी छन् भने नेपालका लागि पूर्वभारतीय राजदूत जयन्त प्रसाद, प्रा. महेन्द्र पी. लामा र प्रा. बीसी उप्रेती सदस्य छन् ।
असार २१ :- नेपाल र भारतबीच सन् १९५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धि पुनरावलोकन गर्न प्रारम्भिक सहमति गर्दै नेपाल–भारत प्रबुद्ध समूह (ईपीजी) को पहिलो बैठक काठमाडौंमा सम्पन्न भएको ।
असार २२ :- हङ्कङ सरकारले नेपाली महिला रिता गुरुङलाई त्यहाको उच्च सरकारी सम्मान ‘चिफ एक्ज्युकेटिभ कमेन्डेसन फर कम्युनिटी सर्भिस’ प्रदान गर्ने निर्णय गरेको ।
असार २४ :- बिमा समितिले ‘मोटर बिमा दरसम्बन्धी निर्देशिका २०७३’ जारी गर्दै यात्त्रु विमा रु ५ लाखको हुने व्यवस्था गरेको । यो व्यवस्था आउँदो साउन १ गते देखि लागू हुने छ । यसअघि प्रतिसिट १ लाख रुपैयाँ बराबरको बिमा हुने व्यवस्था थियो । उक्त बिमांकको सीमाभित्र रहेर दुर्घटनामा मृत्यु भएका यात्रु, चालक परिचालहकहरूले किरिया खर्चबापत ५० हजार रुपैयाँ पाउने व्यवस्था पनि समितिले गरेको छ ।
असार २६ :- यसअघि नयाँ शक्ति नेपाल भनी चिनिँदै आएको दल 'नयाँ शक्ति पार्टी नेपालका' रूपमा निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएको । उक्त दल नेपालको १८० औं राजनीतिक दलको रुपमा दर्ता भएको छ ।
असार २६ :- मन्त्रिपरिषद बैठकले छिमेकी मुलुक चीनलाई विश्वमै दुर्लभ एकसिंगे गैंडा दुई जोडी उपहार दिने निर्णय गरेको । गैंडा गणना २०१५ अनुसार नेपालमा चितवन र बर्दिया निकुञ्ज तथा पर्सा र शुक्लाफाँटा आरक्षमा जम्मा ५ सय ४५ गैंडा छन् ।
अ‍‍सार २६ :- चितवन जिल्ला विकास समिति मुलुककै पहिलो वातावरणमैत्री कार्यालय घोषणा भएको । वातावरणमैत्री स्थानीय शासन प्रारुप २०७० ले तोकेका सूचक पूरा गरेकाले वातावरण मैत्री कार्यालय घोषणा गरिएको हो ।
असार २८ :- संयुक्त राष्ट्र संघको खाद्य तथा कृषि संगठन (एफएओ) ले सन् २०१६ मा विश्वभर मुसुरो उत्पादन गर्ने मुलुकहरूको सूचीमा नेपाललाई पाँचौं स्थानमा राखेको । मुसुरो उत्पादन गर्ने प्रमुख मुलुकहरूमा भारत, क्यानडा, टर्की, अस्ट्रेलिया प्रमुख चार मुलुक हुन् भने नेपाल पाँचौं मुलुक हो ।
असार २९ :- २०७२ आश्विन २४ गते प्रधानमन्त्री पदमा निर्वाचित केपी शर्मा ओली सरकारका विरुद्द माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेससहितका दलको सहयोगमा संसद्मा अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गराएका ।
असार ३० :- बैंक अफ काठमान्डु र लुम्बिनी बैंक एक आपसमा गाभिएर बैंक अफ काठमान्डु लुम्बिनी लिमिटेडको नामबाट एकीकृत कारोबार सुरु गरेको ।
15 June 2016 :- संयुक्त राष्ट्र संघको ७१ औं महासभाको अध्यक्षता फिजीका कुतनितिज्ञ पिटर थोमसनले गर्ने भएका । उनी २०१६ को सेप्टेम्बरमा हुने महासभा पछी आफ्नो कार्यकाल सम्हाल्नेछन ।
17 June 2016 :- “Inclusive cooperation for achieving Land Degradation Neutrality” भन्ने नाराका साथ मरुभुमिकरण विरुद्दको अन्तरराष्ट्रिय दिवस मनाइएको ।
21 June 2016 :- "Connect The Youth" भन्ने नाराका साथ २०१६ को अन्तरराष्ट्रिय योगा दिवस मनाइएको । २०१५ देखी संयुक्त राष्ट्र संघको अगुवाइमा यो दिवस मनाउदै आइएको छ ।
23 June 2016 :- Shanghai Cooperation Organization (SCO) को शिखर सम्मेलन उज्वेकिस्तानमा सुरु भएको (दुइ दिने ) । सांघाइ कोअपरेसन अर्गनाइजेसनको प्रधान कार्यालय चीन मा रहेको छ । २००१ मा स्थापना भएको यो संस्थामा किर्गिस्तान, काजाकिस्तान, रुस , चीन , ताजिकिस्तान र उज्वेकिस्तान गरी ६ देश सदस्य छन ।
24 June 2016 :- बंगलादेशको बोङ्रामा रहेको माहसंग्र शहरलाई सार्कको २०१६-२०१७ को सांस्कृतिक राजधानिको रुपमा घोषणा गरिएको । हाल २०१५-२०१६ को लागि अफगानिस्तानको बामियान शहर सांस्कृतिक राजधानिको रुपमा रहेको छ ।
4 July 2016 :- ५ वर्षअघि फलोरिडाको केप केनवेरालबाट पठाइएको ‘जुनो’ नामको अन्तरिक्ष यान बृहस्पति ग्रहमा पुगेको । अन्तरिक्षबारे अनुसन्धान गर्ने अमेरिकी संस्था ‘नेसनल एरोनोटिक्स एन्ड स्पेस एडमिनिस्ट्रिेसन (नासा) को क्यालिफोर्नियास्थित जेट प्रपल्सन लेब्रोटरी (जेपीएल) का अनुसार यो यान सौर्य ऊर्जाबाट चल्छ।
11 July 2016 :- "Investing in teenage girls" भन्ने अन्तरराष्ट्रिय नाराका साथ विश्व जनसंख्या दिवस मनाइएको ।
13 July 2016 :- थेरेसा मे बेलायतको प्रधानमन्त्री चुनिएकी । कन्जरभेटिभ पार्टिकी उनी बेलायतको प्रधानमन्त्रि हुने दोस्रो महिला हुन (पहिलो मार्गरेट थ्याचर) ।